यी संकेतबाट थाहा पाईन्छ गर्भमा छोरा छ कि छोरी ? - Internet Khabar
November 6, 2018 December 18, 2018 Internet Khabar
यदि गर्भमा छोरी छ भने गर्भवती महिलामा महिला हार्मोनको मात्रा बढेको हुन्छ । त्यसैले उनी धेरै मुडी हुन्छिन्। त्यस्तै, शरीरक अंगहरुले पनि छोरा वा छोरी के छ भन्ने कुरामा संकेत गरिरहेको हुन्छ । यदि महिलाको स्तनको टुप्पोको रंग बढी कालो हुँदै गयो भने उनको गर्भमा छोरा रहेको हुन्छ । यदि ती महिलाको स्तनको रंगमा थोरै मात्र परिवर्तन भएको छ भने, उनको गर्भमा छोरी हुन्छ।
पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउने काममा तीब्रता
सन्तान नहुँदा अपमान गर्नेलाई आयो यस्तो कडा कानुन !
February 23, 2017 July 30, 2018
September 4, 2017 October 19, 2018